ဖောက်သည်အကဲဖြတ် - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / ကြှနျုပျတို့အကွောငျး / ဖောက်သည်အကဲဖြတ်
0 န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကုမ္ပဏီတွင်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် hardware နှင့် diy နှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် client သည် hardware ပိုက်ကွန်ဒုံးများကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူကငါတို့အတွက်ထုံးစံအတိုင်းမှာယူတဲ့အခါငါတို့ထုတ်ကုန် - လျှပ်စစ်ကြိတ်သံအသစ်ကိုအကြံပြုခဲ့တယ်။
ဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်သူသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူကဤထုတ်ကုန်သည်သူ၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွှယ်နိုင်ကြောင်းနှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီသည်ဤထုတ်ကုန်များကိုရောင်းချနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဖောက်သည်၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောအမိန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ခဲ့သည်။
သူနမူနာတွေရပြီးနောက်ငါတို့ထုတ်ကုန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသူအသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောဒီဇိုင်းထုပ်ပိုးမှုကိုပြပြီးနောက်ဖောက်သည်သည်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်ချက်များစွာကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည် B42X နှင့် B420 အစု 500 အတွက်အမိန့်အနည်းငယ်ကိုထားခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဖောက်သည်သည်2လနီးပါးမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါ, ထုတ်ကုန်နှင့်ပြaနာရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အီးမေးလ်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစေလွှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဖောက်သည်များထံမှပြန်ကြားချက်များရရှိခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်ချက်အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းသည်, စျေးနှုန်းသည်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသည်, အမြတ်အစွန်းပိုမိုများပြားလာသည်။ ဤကာလအတွင်းသူတို့သည်ပြည်တွင်းစျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအပေါ်အခြားအမျိုးအစားများရှိမရှိကြည့်ရန်စျေးကွက်သုတေသနပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည်အချိန်တိုင်းတွင် 3000 ခုကိုဝယ်ယူကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM0န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဤဖောက်သည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏အခြားထုတ်ကုန်များကိုပုံမှန်ဖောက်သည်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဖောက်သည်များထံတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဖောက်သည်သည်သူသည် DIY ကိုနှစ်သက်ပြီးမကြာခဏထုတ်ကုန်အချို့ကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်ဟုထင်ဟပ်သည်။ သူကဒီထုတ်ကုန်ဟာသူတို့ရဲ့ဒေသတွင်းမှာလူကြိုက်များသင့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းကအရမ်းတတ်နိုင်တယ်, အမြတ်အစွန်းနဲ့အတူထားဖို့ကြိုးစားချင်တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမိန့်သည်အတော်အတန်သေးငယ်ပြီးသူသည် GT220 အစုံ 100 သာ0ယ်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်ကသေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်စံချိန်စံညွှန်းတွေကိုဒီဖောက်သည်ကိုသာပို့ပေးလို့မရဘူး, စိတ်ကြိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ငွေမတောင်းဘူး, ဒီဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကပိုပြီးအရေးတကြီးဖြစ်နေပြီးတောင်းဆိုချက်ကတော့ UPS အတွက်ပါ။ UPS ၏ကုန်တင်လေကြောင်းသည်အလွန်မြင့်မားပြီးတန်ဖိုး၏ 30% နီးပါးနီးစပ်သော်လည်းဖောက်သည်သည် UPS ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်သည်စတော့ရှယ်ယာများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်အမြန်ပေးပို့ခြင်းသည်အလွန်အမင်းချို့ယွင်းမှုကြောင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲချောမွေ့သည်။0ယ်ယူသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများရရှိသောအခါသူသည်ထိုနေ့တွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူသူတို့၏ကလပ်သို့သွားခဲ့သည်ဟုသူကပြောသည်။ သူတို့ထဲမှအချို့သည်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏လျှပ်စစ်ကြိတ်ခွဲစက်များဝယ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်တစ်ညတွင်ထုတ်ကုန် 70 ကျော်ကိုရောင်းချခဲ့ကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖောက်သည်ကဒီကိရိယာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသုံးနေတုန်းဒီထုတ်ကုန်ရဲ့နောက်ပိုင်းအဆင့်မှာဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေလိုသေးတယ်,
ဖောက်သည်ရဲ့အရောင်းအ0ယ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အရမ်းပျော်တယ်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ဖောက်သည်များ၏အပိုင်း 500 အတွက် plug များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် converterter ကိုသုံးရန်မလိုအပ်ပါ။ ယခုအခါသုံးစွဲသူသည်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းရှိပြီးပျမ်းမျှဝယ်ယူမှုပမာဏမှာအပိုင်း 1000 ဖြစ်သည်။
ဒီဖောက်သည်ကို Ali International Station ပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေတဆင့်သိပြီးသူဟာသြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဘရုစ်လူတန်းစားဆိုင်ရောင်းဝယ်သူကြီးတစ်ယောက်ပါ။ ပထမတော့ဖောက်သည်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ကနို့ပုံးသာသာဖြစ်တယ်, ပြီးတော့အရေအတွက်ကသိပ်မများဘူး, ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်အမြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ပဲလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့,0ယ်သူကကျွန်ုပ်တို့က Skype ရှိလား, ပိုမိုအဆင်ပြေသောချက်တင် software ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်လိုပါသလားဟုမေးခဲ့သည်။ chatting မှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်နှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသင်ယူကြသည်။ သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအခြားသူတစ် ဦး ထံမှလှည့်ပတ်သွားကြောင်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ရဲ့0ဘ်ဆိုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့မေးခဲ့တယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ထုတ်ကုန်အရေအတွက်ကကြီးမားတဲ့မဟုတ်, eBay တွင်အလားတူကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အလားတူကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစျေးနှုန်းကိုလည်းနှိုင်းယှဉ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်သူ့အတွက်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိကြောင်းရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ နှစ်လကြာဆက်တိုက်ဆက်သွယ်မှုအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေမရှိသောထုတ်ကုန်ကားချပ်အချို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသဖြင့်ဖောက်သည်သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မွမ်းမံနိုင်သည်။0ယ်ယူသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်မှုရရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်မှအကြံပြုသောထုတ်ကုန်အချို့ကိုသူအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အရောင်းအပြီးတွင်0ယ်ယူသူသည်အရောင်းအသံပမာဏသည်မကောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါသုံးစွဲသူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လစဉ်ထုတ်ကုန်များကိုပုံမှန်အမှာစာများပြုလုပ်ပြီးသြစတြေးလျတွင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်ဖြစ်လာသည်။
0 န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိကြီးမားသောလက်သည်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၌လက်တွေ့ရောဂါလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးဌာနများစွာလည်းရှိသည်။ ဒီဖောက်သည်ကို Google Search မှတစ်ဆင့်သိကျွမ်းတယ်။ တစ်နှစ်တစ်ဝက်လောက်ပြတ်တောက်နေတဲ့ဖြံ Development letter letter letter letter ပို့လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ဖောက်သည်တွေဆီကပြန်ကြားချက်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ သုံးစွဲသူအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုပေးပို့ရန်, အသေးစိတ်ကိုးကားချက်ကို စုစည်း. စာတိုက်ပုံးသို့ပို့ပြီး၎င်းကိုသူတို့၏0ယ်ယူသူများကိုကူးယူပါ။ ပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်လစောင့်နေပြီးဖောက်သည်ကဘယ်တော့မှတုန့်ပြန်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာရင်းကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်နောက်လိုက်ပြီးနောက်ဖောက်သည်သည်သူသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံသို့လာပြီးစက်ရုံလိပ်စာကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖောက်သည်ကကျွန်တော်တို့ကိုဇော်ချမှတ်အချိန်ကိုမပြောပြဘူး, သူဟာအခြားစက်ရုံတွေကိုသွားကောင်းသွားနိုင်တယ်။ သူကစက်ရုံကိုမလာခင်တစ်ရက်ကသူ့ဆီကနေဖုန်းခေါ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာသူလည်ပတ်နိုင်မလားမေးတယ်။ သူနက်ဖြန်နေ့ကလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာနှစ်ခုကိုယူပြီးပွဲ၌သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိနေသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သူကကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းမှာမြင့်မားပြီးအခြားပေးသွင်းသူများထက် 20% ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းသူကပြောသည်။
တကယ်တော့ဖောက်သည်တွေက0ယ်ယူတဲ့အခါမှာဖောက်သည်တွေအတွက်နေရာချထားတယ်။ ကျနော်တို့ကထပ်တွက်လို့ရတယ် \_"ဟုပြောသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုးကားထားသည့်စျေးနှုန်းသည်မြင့်မားလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်။ ဖောက်သည်သည်အလွန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲခဲ့ပြီးချက်ချင်းပင်သူသည်အမိန့် 5000 အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဖောက်သည်အမိန့်အရေအတွက်ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်, သူသည်ဖောက်သည်ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဒီဖောက်သည်ကို eBay မှာတွေ့ခဲ့တယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သောကုန်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်သည်များရှာဖွေသောအခါသူ၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်0ယ်ယူသူအားဟန်ဆောင်ရန်နှင့်သူနှင့်စကားပြောရန်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည် ။ သူရောင်းချခဲ့သောထုတ်ကုန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကငါတို့ကဲ့သို့နီးပါးဖြစ်သဖြင့်အခြားအကောင့်တစ်ခုဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစာတစ်စောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ စာသုံးလုံးသို့မဟုတ်လေးခုကိုပေးပို့ပြီးနောက်ဖောက်သည်ကတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်သူ၏စျေးနှုန်းထက်အမှန်ပင်မြင့်မားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကနမူနာတစ်ခုဝယ်ဖို့ဝယ်ချင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုနမူနာတစ်ခုပို့လိုက်တယ်။ နမူနာကိုခံယူပြီးနောက်သူသည်၎င်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်သူ၏ထုတ်ကုန်မှာယခင်ကကဲ့သို့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှကုန်ပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အချိန်တိုင်းအမှာစာအရေအတွက်သည်ကြီးမားသည်မဟုတ်သော်လည်းအမှာစာများကိုကြိမ်နှုန်းသည်မကြာခဏဖြစ်သည်။ ဤဖောက်သည်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည် T / T ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုမရောက်ရှိနိုင်သောအမိန့်၏နောက်ဆုံးငွေပေးချေမှုနှင့်အတူပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကသူတို့ဘဏ်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဖောက်သည်ဟောင်းဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကို ဦး စွာတင်ပို့ရန်သဘောတူခဲ့ပြီးနောက်သူသည်လာမည့်အမိန့်ကိုငွေပေးချေရန်သဘောတူခဲ့သည်။ မမျှော်လင့်ဘဲအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကြောင့်သူ၏လုပ်ငန်းကိုခဏတာခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါသူကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့တယ်။ ကြွေးကျန်များကို ဦး စွာပေးရန်ပြောခဲ့သည်။ သို့သော်0န်ဆောင်မှုခံယူသူကငွေလဲလှယ်နှုန်းသည်သူတို့အတွက်အလွန်ဆုံးရှုံးနေကြောင်းနှင့်သူသည်မပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကြွေးကျန်များကိုဘယ်တော့မှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါ။0န်ဆောင်မှုခံယူသူအသစ်သည်လည်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအသစ်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စကဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဟာ0ယ်ယူသူတွေကဟောင်းနွမ်းသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်သက်သာစရာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းလေ့လာသင်ယူကြတယ်။